Mugadziri Pepper Kukuya Kofi Grinder Ceramic Kukuya Core
Ceramic kukuya macores akagadzirwa nezvinhu zvisina kujairika senge alumina iyo ino sinteredi patembiricha iri pamusoro pe1300 degrees Celsius. Izvo zvakasarudzika zvezvinhu zvinoita kuti zvedongo kukuya macores ane hunhu hwekukwirira kuomarara, kupfeka kuramba, kupisa kupisa kupisa, kurwisa ngura, kuchengetedzeka uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, yakakwana kune izvo zvakakanganisika zvepurasitiki kana simbi yekugedza macores.
Iyo yeClassic Stainless Simbi Inogadziriswa Manual Kofi Grinder
Iyo dhigirii yekukuya mukofi inokanganisa zvakananga nzvimbo yekubatana pakati pekofi nemvura uye nguva yekubvisa kofi.
Nyanzvi Kugadzira Kwemakero Akasiyana ECeramic Flat Burrs
Iyo yekukuya burr ndiyo inonyanya kukosha chikamu cheiyo yekukuya. Yakasiyana grinder burrs ichaendesa zvakananga iyo kofi poda dhayamita. Iko parizvino ubiquitous grinder burrs mhando dzakakamurwa kuita conical burr, flat burr uye chipoko mazino burr.
Yakagadziriswa Stainless Simbi Girazi Bhodhoro Munyu Pepper Shakers
Munyu uye mhiripiri zvinozungunusa kana anonzi mabhodhoro ekumaka ndiwo mabhodhoro anoshandiswa mukicheni kutakura zvinonhuwira zvakasiyana.